कसैलाई उपचार खर्च राज्यकोषबाट ३० लाख, कसैलाई सिटामोल खान भाले बेच्नु पर्ने सरकार ? – Taja Khawar
कसैलाई उपचार खर्च राज्यकोषबाट ३० लाख, कसैलाई सिटामोल खान भाले बेच्नु पर्ने सरकार ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ समय: १७:५३:३८
एमाले नेता झलनाथ खनालको उपचारार्थ सहयोगको लागि सरकारले राज्यकोषबाट ३० लाख रकम निकासा भएको समाचार बाहिर आए पछी सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
सरकारको उक्त कार्यको सत्तारुण नेता गगन थापाले समेत असहमति जनाईसकेकाछन। सामाजिक सन्जालमा सरकार तेही नेपाली जनता कसैलाई उपचार खर्च राज्यकोषबाट ३० लाख कसैलाई रितो हात जस्ता बिरोधाभाष अबिव्यक्तीहरु पोखिरहेकाछन।
हुन पनि जनता संग एउटा सिटामोल खाने पैषा छैन तर करोडौका मालिक नेताहरुका लागि राज्यले यसरी खर्च गर्नु पकै राम्रो भने होईन।
एउटै औषधि कतिसम्म महँगो होला ? सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता हो– जोल्जेन्स्मा नामको औषधिलाई २१ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (२५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) पर्छ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ। भैरहवाकी २२ महिने सियोना श्रेष्ठ उक्त औषधिबाट उपचाररत छिन्।
यी सानी नानीको महँगो उपचार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। एलिना गुरुङ श्रेष्ठ र डा. सन्दिप श्रेष्ठकी छोरी एलिनाको दुबईमा उपचार भइरहेको छ।
Last Updated on: July 26th, 2021 at 5:53 pm